Ukukhiqiza kwamanje kudinga ukuthuthukisa izinga lemishini. Lokhu kuzokuvumela ukuba ukhiqize izakhi eziningi ezivela kunoma yiziphi izinto. Izinkuni zidinga ukusebenzisa uhlobo olukhethekile lomshini wokugaya. Lokhu kuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo oqediwe, ukuqina kwayo, futhi kuvumela ukunikeza umkhiqizo ubuhle bokubukeka. I-cutter yomshini womshini esihlahleni, ngokuya ngokucushwa, inezici eziningana. Lokhu kucatshangelwa yi-master, lapho kusetshenzwa izinto. Imininingwane eyengeziwe kule thuluzi izovumela ukuhlukaniswa kwezimboni zezimpawu zeqembu ezahlukene.
Kungakhathaliseki uhlobo, abakwa-cutters for router router banesakhiwo esivamile. Bane-shank nengxenye esebenzayo lapho umkhawulo wokusika ukhona khona. Ukukhiqiza lezi zakhi, insimbi ephakeme yelloy, isetshenziswe amandla.
Ukuma kwe-cutter milling, kungakhathaliseki ukuthi iyidiski noma inguqulo eqondile, ihlale iqinisekiswa ngokuqondile. Ukukhishwa kwenziwa ngosizo lwemishini ekhethekile enempembelelo encane kakhulu. Lokhu kuthuthukisa izinga elisebenzayo lensimbi.
Inezinhlobonhlobo eziningi zokubonakala komshini wokugaya imishini yemishini yokwenza izinkuni. Lokhu kwenza kube lula ukwenza ukucubungula nokuqedela ukucubungula kwezikhala ngokuhambisana nazo zonke izinkambiso nezidingo. Kulesi simo, okusanhlamvu kwezinkuni nobukhulu bayo kufanele kubhekwe.
Amaqembu okusika ama-Milling
Kunezinhlobo ezimbili ezinkulu zama-cutting cutters, okuphakathi kwe-shank ububanzi ngokuvamile yi-32, 12 no-8 mm:
Esikhathini sokuqala, zisetshenziswa ku-spindle ene-32 mm. Lezi izesekeli zomzila omile.
Ukuphela, noma umunwe, umshini we-8 mm wokugaya (futhi utholakala ku-12 mm) usetshenziselwa ukukhiqiza izingxenye zombili kumshini omile kanye nezinto zokusebenza.
Ngohlobo lokuklama, lezi zingxenye zingasuswa, ziqinile, zifakwe eceleni noma zikhethwe. Futhi ngokwemisebenzi bahlukaniswe baba disk, ring, cylindrical nokuphela.
I-cutter ingasetshenziswa ekusetshenzisweni kwe-milling-engraving, enezingqimba noma eziqondile, kumishini ye-CNC.
Abakhi bezinkuni bangahlukaniswa ngokomzimba ngokusho kohlobo lokwakhiwa. Zingaba zihlanganisa noma zihlangene. Uma ucezu olunjalo lincane, umkhiqizi angenza luphelele. Lokhu akuthinti kakhulu izindleko zento. Kodwa imikhiqizo emikhulu inezinduku ezithambile kanye nomkhawulo oqinile kakhulu.
Inzuzo yomshini wokugaya umuthi we-wood is ikhono lokukhetha ububanzi bawo ngobukhulu obudingekayo bokusebenza. Njenge-abrasion, isici esinjalo singashintshwa nge-incisors ezintsha.
Kunezinhlobo ezimbili kuphela zokuzinyoza izinyo. Kungathathwa futhi kukhonjiswe. Iningi livame ukusebenzisa indlela yokuqala. Le mikhiqizo, uma ibukhali, inganciphisi ekuphakameni, okuvame ukwenzeka uma amazinyo abukhali ephuliwe. Lokhu kumane kungamukeleki kwinqubo yezobuchwepheshe.
Ngobulukhuni, kukhona iqembu labacwaningi bezinchungechunge zabachwepheshe kanye nochungechunge N for ukusetshenziswa kwekhaya. Esikhathini sokuqala, izindleko zomkhiqizo onjalo ziyoba ngaphezulu kakhulu. Kodwa ukuqina nokusebenza kwethuluzi lobuchwepheshe kuphakeme. Ngezinhloso zasendlini, kunezinhlobo ezithengi ezithengiwe ezinjalo ezakhiweni.
Ngamafomu, amaqembu amaningana amathuluzi okusebenza ngokhuni ahlukene. Kungaba ukubola, ukuphezu, ukuhlanganiswa nokufanekisa.
Iqembu lokuqala lenzelwe ukukhiqiza zonke izinhlobo zemifula. I-groove yilezi:
Ukunquma izinkuni ngokuqondile;
Ukuze kusetshenziswe ngokunembile emaphethelweni futhi kuphelile ngemikhiqizo yezinkuni, inkosi isebenza ngezinhlobonhlobo zezinkuni. Kungaba iqonde, kalevochnye, isaphulelo, Isigaxa, kucatshangelwe, poluzernzhnevye.
Izinhlobo ezihlangene ziqukethe ekubunjweni kwawo i-groove kanye nengxenye ye-spike. Zisetshenziselwa ukupaka noma ukujoyina izingxenye. Ukuze uthole izinto ezincane noma ukwenza umsebenzi wokunemba okukhudlwana, sebenzisa umshini wokuhlunga uhlobo. Zingaba zingaphansi futhi ziqondile.
Iqembu elizimeleyo yibo abagaya imishini, abasebenzisa ama- carbide-tipped plates ukusika izinto .
Izinsiza zokugaya nokubhala umshini
I-cutter yomshini womshini emapulini ohlobo olunikeziwe lwenzeka ngezinhlobo eziningana. Ingaqedwa, iphele, i-angular noma i-disk. Izinhlobo ezimbili zokuqala zisetshenziselwa ukucubungula izinto ezijwayelekile.
Ukuqeda imishini kubangelwa ukucubungula kuzo zonke izinkomba. Amapulangwe ebuso afaneleka ezindaweni ezipatile.
I-angle kanye ne-dis-cutting milling cutter yezinkuni isetshenziselwa amadwala aqinile. Manje banezinhlangothi ezimbili noma ezintathu, okuvimbela ukuyeka ukushesha.
Uma iphrofayli eyinkimbinkimbi kufanele yenziwe kumshini onjalo, ubujamo obubunjwa buyasetshenziswa. Ziye zafaka amazinyo, okuqinisekisa ukuhlanzeka okuhle kwendawo.
Ukuzenzelela ukucubungula impahla kuvumela ukusika kwe-CNC ngezinkuni. Ukubamba iqhaza kuka-opharetha akudingeki nakanjani, uma ufaka ishintshe yomshini wokuzenzekelayo. Futhi lokhu kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka ukukhiqiza imininingwane enzima kakhulu ngale ndlela.
Izinsiza zinikezwa uhlelo olufaka incazelo yempahla, amathuluzi nemisebenzi. Lokhu kusebenza kukuvumela ukuba ufeze umsebenzi ocacile wokusebenza. Uhlelo olukhethekile lubala, ngokusekelwe esithombeni esilandelayo salo, ingxenye yayo yokuhlola. Lokhu kugwema amaphutha ekubalweni.
Futhi uhlelo olufanayo lungasetshenziswa kunoma yiluphi uhlobo lomshini. Abaqashi be-CNC ngezinkuni bakhethiwe kulokhu ngokuhambisana nohlobo lwemishini.
Imishini eqondile futhi enezingqimba
Ukuze imishini eqondile neyizingqimba, izici zokufakelwa okunjalo zicatshangelwa lapho ukhetha ithuluzi lokusebenza. Uma i-spindle ne-buses ibhalwa ngokuqondile, kunezimiso ezithile zokukhetha imishini.
Ukuze kube khona izindawo ezizungezile zisebenzise izinhlobo ze-cylindrical of cut milling cutters. Uma uqhuba izindiza ezincane, ezithambekele, umuntu kufanele akhethe izinhlobo ezinhlobonhlobo. Umshini we-disk milling ukhahlela emthini. Uma ifomu labo liyinkimbinkimbi, khona-ke ubujamo obubunjwa kufanele busetshenziswe.
Uma kwenzeka ukuthi i-spindle ibekwe ngokuqondile, izincomo ezilandelayo kufanele zilandelwe. Izimpande kumele ziphathwe ngekhanda lokuphela noma ekupheleni kokugaya imishini. Uma indiza yabo ithambekele, kusetshenziselwa okunamathiselwe nge-angular.
I-Keyway groove ikhiqizwa ngokusebenzisa umshini wokugcina. Futhi izinguqulo ezifakiwe zethuluzi ziyasetshenziswa.
Ukunakekelwa kwabagayi bezindleko
Bonke abaqashi bezinkuni, izinhlobo zazo okubhekwa ngazo ngenhla, zidinga ukuqapha okuqhubekayo ngabasebenzi bokulondoloza. Njalo hlola izinga lokuchima, kanye nobuqotho bemikhiqizo.
Ngemuva kokusebenza, abagawuli bahlanzwa udoti, i-tar nama-debris. Zigcinwe endaweni ekhethiwe ngokukhethekile kule njongo. Uma kuhloswe ukungasebenzisi lezi zingxenye isikhathi eside, zisetshenziswa ngamafutha enjini.
I-high-speed steel ingagaya ngemigoqo yokugaya noma ngomshini. Uma ibhuloho inezigcawu ezenziwe ngamathuluzi e-carbide, ama-blade kufanele ahlolwe kuphela kumshini. Futhi le mishini kufanele ibe nesivinini esincane.
Kuvunyelwe ukucubungula izingxenye eziphathekayo kuphela zendawo yokusebenza yama-incisors. Ukuthi ukuphakama kwenqubo yokwenza lo msebenzi kubaluleke kangakanani.
Uma ujwayele ukusebenzisa ithuluzi elinjalo, njengendlela yokusika imishini yomuthi ngomshini, kungenzeka ukhethe kahle uhlobo oludingekayo lwezimo zokusebenza ezikhona. Izinhlobo eziningi zemikhiqizo ezethuliwe zenza kube lula ukwenza imisebenzi yinkimbinkimbi ephezulu kakhulu. Ngesikhathi esifanayo, imikhiqizo eqedile iphezulu yekhwalithi.
Ama-sprinklers for watering: elula futhi enhle
Ikhethini lokushisa "Tropic" kagesi: izici nokubuyekezwa
Sakhiwo amalungu uhulumeni waseRussia
"Kalashnikov" - othomathikhi namuhla
Njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile Polyvalent - kuyini? izimpawu
Izigqoko zamafancy: izitayela zemfashini ezicabangela izici zalesi sibalo